Imbwa Leash & Collar Fekitori - China Imbwa Leash & Collar Vagadziri uye vanotengesa
Mhuka dzinovaraidza dzinodakadza chaizvo, uye muridzi anoda kutora idzi dzinoyevedza dzinovaraidza kana uchienda kunze. Pasina imbwa leashes uye makorari, imbwa inogona kuenda chero kwavanoda kuenda. Nekudaro, makara embwa uye leashes ndiwo akakodzera zvipfuyo zvigadzirwa zvakaiswa, izvo zvinogona kushandiswa pakudzidzisa, kufamba, kutonga, kuzivikanwa, fashoni, kusimudzira zvipo, kana zvimwe zvinangwa. Zvayo zviripo zvigadzirwa zvinoteedzera nylon tambo ine yakarukwa / satin / machira uye tambo. Ultra-yakapfava jira tambo kusona neyekuteedzera nylon tambo ine inoratidzira madonhwe + PU dehwe. Izvo zvinhu zvemaleashes zvinoda kusimba, saka kuteedzera nylon tambo ndiyo sarudzo yakanaka. Zvakare, zvakasiyana siyana zvishongedzo zvinogona kusarudzwa senge chengetedzo bhurugwa, inogadziriswa bhureki, epurasitiki inotsvedza, carabineer chirauro uye zvimwe zvakagadzirwa accessories. Kana kana iwe uchigona kuwedzera zvimwe zvakasarudzika zvinoshanda, ndizvo. Nezve logo, akasiyana maitiro anogona kusarudzwa kusanganisira silkscreen kudhinda, offset kudhinda, sublimated logo kana rakarukwa. Kureba kwayo kune saizi yakaenzana, asi kana iine saizi yakagadziriswa, inogamuchirwawo. Kana iwe uchiri nekumwe kusahadzika, tisiye isu uye ngatiregei isu tipe mazano ehunyanzvi. Mira kuzeza uye utibate isu nekukasira.